G-spot အကြောင်းသိကောင်းစရာ – Gentleman Magazine
လိင်မှု ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဖက်ရှင်တစ်ခုအဖြစ် ယနေ့ပြောဆိုနေသော စကားလုံးမှာ G-spot ဆိုသော စကားဖြစ်ပြီး လိင်မှု ရေးရာအကြောင်း ပြောဆိုသည့်အခါ မပါမဖြစ် ပါဝင်နေသော စကားလုံး ဝေါဟာရ တစ်ခုဖြစ်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။
၄င်း G-spot ဟူသော စကားလုံးကို ၁၉၅၀ ခုနှစ် ကတည်းက ဂျာမန်လူမျိုး ခန္ဓာဗေဒ ပညာရှင်များက ထုတ်နုတ် သုံးစွဲ ခဲ့ကြပြီး ယနေ့ခေတ်အထိ ပြောစမှတ်တွင် နေကြခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ G-spot သည် အမျိုးသမီးများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ မယုံကြည် နိုင်လောက်ဖွယ် သက်တောင့် သက်သာ ရှိမှုနှင့် ကာမဆန္ဒ ပြည့်ဝ ကျေနပ်စေမှု (အထွဋ်အထိပ် အရသာ) တို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသော ကျော်ကြားသည့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။
၄င်း နေရာလေးသည် အမျိုးသမီး ယောနိ အင်္ဂါကဲ့သို့ပင် အလွန်တုန့်ပြန်ခံစား လွယ်သော တစ်ရှူးများဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး မိန်းမကိုယ် (ယောနိအင်္ဂါ) ၏ အတွင်း အရှေ့ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည်။ အမျိုးသားများ၏ လိင်တံ အင်္ဂါကဲ့သို့ပင် နှိုးဆွပေးသည့် အခါ မာကြော တောင့်တင်း လာပြီး တုန့်ပြန်တတ်သည့် ထပ်တူညီ သဘာဝလည်း ရှိသည်။ ထို အစိတ်အပိုင်းလေးကို တို့ထိရာတွင်
နူးညံ့ငြင်သာစွာ ထိတွေ့ရန် အထူး လိုအပ်သည်။ ဖြစ်နိုင်လျင် လက်ချောင်းလေးဖြင့် အပြားလိုက် သာသာ ယာယာ
နိုပ်နယ်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီး၏ ခံစားမှုကို နှိုးဆွ ရယူနိုင်သည်။
အမျိုးသမီး အတော်များများတွင် ယောနိအင်္ဂါ ထိပ်ရှိ လွန်းပုံသဏ္ဍန်ရှိ (အစေ့)လေး ကို နှိုးဆွပေးခြင်း အားဖြင့် ကာမ ဆန္ဒ အမြင့်ဆုံး ခံစားတတ်ကြသည်ကို တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ နှိုးဆွပေးခြင်းသည် ဆက်ဆံမှု၏ အစပိုင်းတွင်သာ ဖြစ်ပြီး အထွဋ်အထိပ် ကာလ မရောက်မီအတွင်း ပျိုးယူပေးသော အဆင့်တွင်သာ ရှိသေးသည်။ ကာမ ဆန္ဒနိုးကြွခြင်းနှင့် အထွဋ်အထိပ် ခံစားခြင်းတို့မှာ ကွဲပြားခြားနားခြင်းကို ကောင်းစွာ နားလည် သဘောပေါက်ရန် ဆက်ဆံမည့် စုံတွဲတိုင်း သတိပြုသင့်သည်။ အချို့မှာ စိတ်ဆန္ဒ နှိုးကြားရုံ သက်သက်သာရှိပြီး ကာမ ဆက်ဆံ၍ ပြီးဆုံးချိန်တွင် အပြည့်အ၀ မကျေနပ်ကြခြင်းမှာ နားလည်မှု
လွဲမှားခြင်းကြောင့်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုလွဲမှားမှုသည် G-spot ၏ အပိုင်း ကဏ္ဍ နှင့် ဆက်စပ်မှု အများကြီးရှိနေပြီး G-spot သည် အာရုံနိုးကြားမှု အင်္ဂါ၏ အရင်းအမြစ် သို့မဟုတ် အာရုံကြောများ၏ အလွန်အတွင်း ကျသော လျို့ဝှက် အစိတ်အပိုင်းလေး ဖြစ်သည်။
G-spot ၏ နိုးဆွမှုသည် အပေါ်ယံမှ တုန့်ပြန်လာခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ အမျိုးသမီး အင်္ဂါ ယောနိ၏ အတွင်းပိုင်း အကျဆုံးသော အပိုင်းမှ တုန့်ပြန်လာသည့် ခံစားမှု ရသကောင်း ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာပေးခြင်း အားနည်းမှုကြောင့် အမျိုးသမီး အတော်များများသည် G-spot ၏ အရသာထူးကို ခံစားဖူးသော တွေ့ကြုံဖူးသော တုန့်ပြန်မှု အလွန်နည်းပါး ကြသည်။
တစ်ကိုယ်ရေ ဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့် ကျေနပ်တတ်ကြသော အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် လိင်အင်္ဂါအတု (Vibratory) ၏ တုန်ခါမှုမှ တစ်ဆင့် ရရှိသော ခံစားချက်ကို နှစ်သက် ကြသလို စိတ်ပျက် ကြသူများလည်း ရှိသည်။ အချို့မှာ ယားကျိကျိ ခံစားမှု မှတဆင့် G- spot ၏ အရသာကို နှစ်သက် သွားတတ်ကြသူများလည်း ရှိသည်။
အမှန်မှာ G-spot ၏ တုန့်ပြန်မှုမှာ ခန့်မှန်းရ အလွန်ခက်ပြီး မည်သို့ အကျိုး ခံစားရသည်ကို သိရှိရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် G-spot ၏ တုန့်ပြန်မှုကို အရင် စမ်းသပ်ကြည့် ပြီးမှသာ မိမိ၏ လိင်ဆက်ဆံဖေါ်အား မိမိ၏
နှစ်သက်သော အနေအထားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြခြင်းဖြင့် အကောင်းဆုံးသော ကျေနပ်မှုကို ရရှိမည် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ ပြောဆိုရန်အတွက် မည်သို့မျှ အတားအဆီး မထားသင့်ဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပုံမှန်သဘောဝ တစ်ခုကဲ့သို့ တိုင်ပင်မှသာနှစ်ဦးစလုံးအတွက် အလွန်ကောင်းသော အတွေ့အကြုံများဖြင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို သတိပြုမိမည် ဖြစ်သလို ပြောဆို ဆွေးနွေးလာသည့် အမျိုးသမီးများ အပေါ်တွင်လည်း ဆက်ဆံဖေါ် အမျိုးသားက နားလည်မှု လွဲမှားစွာဖြင့် ကာမ ရမက်ကြီးသူအဖြစ် အထင်မလွဲစေရန် အထူးအရေးကြီးပြီး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ ပြည့်ဝသူအဖြစ် အထင်ကြီးလေးစား လက်ခံပေး သင့်သည်။
ခန္ဓာဗေဒ အားဖြင့် G-spot ကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေရမည်ကို ဦးစွာ လေ့လာရပေမည်။ ဆီးလမ်းကြောင်း တစ်လျောက် ယောနိအင်္ဂါ၏ အပေါ်ပိုင်း ဆီးအိတ်နှင့် အပြိုင်အနေအထားတွင် ရှိနေပြီး လွန်းပုံသဏ္ဍန် အစေ့တည်ရှိရာ၏ အောက်ဖက် အပေါက်ဝ တည့်တည့်နားတွင် တည်ရှိသည်။ ရေမြုပ်ကဲ့သို့ တစ်ရှူးစများက ဆီးလမ်းကြောင်းကို ၀န်းရံထားပြီး သွေးလည်ပတ်မှု ကောင်းမွန် လာသောအခါ အမျိုးသမီးတို့၏ ကိုယ်မှ ထွက်လာသော အရည်ကြည်များကို အသုံးပြုပြီး ကာမ ဆက်ဆံလိုသော ကာမ စိတ်ဆန္ဒတို့ စတင် လာပြီ ဖြစ်သည်။ ရေမြုပ်ကဲ့သို့ ပွစိစိ တစ်ရှူးများသည် အစေ့၏ အမြစ်ကဲ့သို့ ရပ်တည်နေကြပြီး ယောနိအင်္ဂါ၏ အတွင်းအကျဆုံး နေရာတွင် တည်ရှိသည်။
အမျိုးသမီး ယောနိ အင်္ဂါ အတွင်းသို့ လက်ချောင်း တစ်ချောင်း သို့မဟုတ် နှစ်ချောင်း ထည့်သွင်းပြီး အတွင်းဖက် အရှေ့ပိုင်း နံရံနှင့် ဆီးခုံရိုး၏ အောက်ခြေနားတွင် G-spot တည်ရှိပြီး ထိုနေရာကို ထိတွေ့မိပါက G-spot ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသို့ စမ်းသပ်မိနေပြီ ဖြစ်သည်။
ထိုနေရာ အရောက်တွင် ခံစားမှု တုန့်ပြန်ချက်များအဖြစ် အာရုံကြောများ ပွင့်ကားလာသည့် သဖွယ် ခံစားရပြီး အိစက် ညက်ညောသည့် တစ်ရှူးများကို လက်ချောင်းများဖြင့် မိမိနှစ်သက်သော အနေအထားအတိုင်း တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့ ညင်သာစွာ အပြောင်းအရွှေ့ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပိုမို သက်တောင့်သက်သာ ရှိသော ခံစားမှုမျိုးကို ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ လက်ချောင်းများသည် အမျိုးသား အင်္ဂါနှင့် စာလျင် ပိုမိုထိရောက်လေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီး၏ G-spot ရှိရာသို့ တန်းတန်း မတ်မတ် ရှာဖွေနိုင်ခြင်းလည်း ရှိကြသည်။
လိင်အင်္ဂါအတု (Sex Toys) ထုတ်လုပ်သော ကုမ္မဏီများက အစေ့နှင့် G-spot ကို နှိုးဆွရာတွင် ထိရောက်မှု ပြုသော ပုံစံများကို ပြုလုပ်၍ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ ကြသည်များလည်း ရှိသည်။ ဆေးပညာမှ ကာမ အာရုံ ခံစားမှုကို ပိုမိုနိုးကြားပေးရန် ပြုစု ကုသရန် နည်းသစ် တစ်ခုတွင် G-spot တစ်ခုအတွင်းသို့ ဆေးရည်တစ်မျိုး ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် ကာမ ဆန္ဒ တုန့်ပြန်မှု ပိုမိုကောင်းမွန် စေသည်ကိုလည်း ထပ်မံတွေ့ရှိထားသည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ခြင်းသည် လျို့ဝှက်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်လေ့ ရှိကြပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပေါင်တစ်ထောင်ခန့်အထိ ကျသင့်ပြီး ပုံမှန် လေးလမှ ခြောက်လ အတွင်း တစ်ကြိမ် ကုသမှု ခံယူရလေ့ ရှိသည်။ ခွဲစိတ် ကုသမှုများသည် အလွန် ကုန်ကျစရိတ်များပြားလှပြီး ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ပိုမိုခံစားလိုသူများ အတွက်မူ အကောင်းဆုံး အခွင့် အလမ်းများပင် ဖြစ်နေမည် ဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီး အတော်များမှာ G-spot နှင့် ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်မှု အလွန်ကောင်းမွန်ကြပြီး ယခုကဲ့သို့ ကုသမှု ခံယူထားခြင်းနှင့် များစွာ ခြားနားလှခြင်း မရှိကြပေ။ သာမာန်လူများအတွက် မိမိ၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသို့ ကုန်ကျစရိတ် ကြီးကြီးဖြင့် အပ်တစ်ချောင်းကို ပုံမှန်ထည့်သွင်းပြီး ကာမ ဆန္ဒအတွက် ဖြည့်စွက်ရမည် ဆိုသည်မှာ အနည်းငယ်သော အကြောင်းပြချက်မျှလောက် ဖြင့်တော့ မဖြစ်သင့်ပေ။
အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အစေ့၏ နှိုးဆော်မှုဖြင့် စတင်သော လိင်ဆက်ဆံမှုက အမြင့်ဆုံး အနေအထားသို့ ရောက်ရန် လုံလောက်မှု ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။ ခြုံ၍ ပြောရမည် ဆိုပါက အမျိုးသမီးများ၏ လိင်အင်္ဂါသည် အမျိုးသားများအတွက် စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးရန် လုံလောက်ပြီး အမျိုးသား အင်္ဂါသည်လည်း ထိုနည်းတူစွာ အမျိုးသမီးများ အတွက် ပြည့်စုံပြီးသား သဘာဝက ပေးထားသည့် ဆုလာဘ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှု၏ ကျေနပ်မှု မကျေနပ်မှုသည် အမျိုးသမီး၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ဆန္ဒနှင့်လည်း အများကြီး သက်ဆိုင်နေသည်။ သူမ အနေဖြင့် ကာမ ဆန္ဒကို ရယူခံစားလိုလျင် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည် ဖြစ်ပြီး သူမ အနေဖြင့် ဆန္ဒမရှိပါက အမျိုးသားမှ သူမ၏ ဆန္ဒအပေါ် ဖိအားပေးခြင်းမျိုး မပြုသင့်ဘဲ လိင်ဆက်ဆံမှု အပေါ် သူမ စိတ်ဝင်စားနိုင်သည့် အခြားပုံစံအသစ်များကို တီးခေါက် ကြည့်တတ်ရမည် ဖြစ်သည်။
လူအတော်များများ အငြင်းပွါး နေရသည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ အမျိုးသမီး ခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်သည် G-spot သို့ အမျိုးသားခန္ဓာကိုယ်မှ ထွက်သော အရည်နှင့် တိုက်ဆိုင်မှသာ အမျိုးသမီး ကျေနပ်မှု အပြည်အ၀ ရသည်ဟု ထင်မြင်နေကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။ အရည်ထွက်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ရေမြုပ်သဏ္ဍန် တစ်ရှူးများမှ နိုးကြားလာခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်ပြီး ချောဆီ တစ်ခုသဖွယ် အသုံးပြုရန် သက်သက်သာ ဖြစ်သည်။ အချို့အမျိုးသမီးများမှာ ထိုသို့ အရည် များများ ထွက်လာခြင်းကို ဆီးသွားသည်ဟု ထင်ပြီး ဆရာဝန်များနှင့် ပြသသည်အထိ စိုးရိမ်တတ်ကြပြီး ကျွမ်းကျင်သူများ၏ ဖြေရှင်းချက်အရ အရေးကြီးသော ကိစ္စတစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။
အရည်ထွက်ခြင်း၏ အဓိက အခြေခံ အကြောင်းမှာ သူမအနေဖြင့် ကာမ ဆက်ဆံဖက်အပေါ် ကျေနပ်ခြင်းကြောင့် အချက်ပြသော သင်္ကေတ တစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ သူမ အနေဖြင့် လိင်ဆက်ဆံရန်အတွက် စိတ်ပျက်ခြင်း မရှိသလို ကြောက်ရွံ့ထိပ်လန့်ခြင်း မရှိဘဲ ပွင့်လင်းမှု အပြည့် ရှိနေခြင်းကြောင့် ထိုသို့ တုန့်ပြန်လာခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ အရည်များ ထွက်ခြင်းကို လိင်ဆက်ဆံခြင်း၏ အချိန်ကာလ အတွင်း အနှောင့်အယှုက် မဖြစ်စေရန် အိပ်ယာပေါ်တွင် မျက်နှာသုတ် ပ၀ါသို့မဟုတ် ရေစိုခံ အထည်တစ်ခု ခင်းထားခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
ယခု ဆောင်းပါး၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ G-spot ကို အသားပေး နှိပ်နှယ်ခြင်း ပြုလုပ်ရန်ထက် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ကာမ ဆက်ဆံခြင်းအပေါ် ပွင့်လင်းစွာ အကြိုက်ခြင်း ဖလှယ်နိုင်ရန်သာ ရည်ညွန်းသည်။ ကာမ ဆက်ဆံစဉ် နှစ်ဦးကြား သုံးစွဲသော စကားလုံးများ၏ အသုံးအနှုန်းအပေါ် တဆင့် နားလည်မှု လွဲသွားမည်လော ဆိုသည့် ဖိအားနှင့် ခံစားချက်မျာ မထားကြဘဲ ကာမဆက်ဆံစဉ် စကားလုံးမှအစ စိတ်ဆန္ဒအထိ နှစ်ကိုယ့် တစ်စိတ် ဖြစ်လာကြစေရန် ကြိုးစားအားထုတ်မည် ဆိုပါက အကောင်းဆုံးသော ကာမ သုခကို ခံစားနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
အောက်ပါ Position တွေကတော့ Gspot ကိုထိစေပြီး ကာမသုခအပြည့်ရစေဖို့ နည်းစနစ်တွေဖြစ်ပါတယ် လေ့လာလိုက်ပါဦး….
G-spot နှငျ့ ကာမ သုခ
လိငျမှု ရေးရာ ကြှမျးကငျြသူမြား၏ ဖကျရှငျတဈခုအဖွဈ ယနပွေ့ောဆိုနသေော စကားလုံးမှာ G-spot ဆိုသော စကားဖွဈပွီး လိငျမှု ရေးရာအကွောငျး ပွောဆိုသညျ့အခါ မပါမဖွဈ ပါဝငျနသေော စကားလုံး ဝေါဟာရ တဈခုဖွဈလာနပွေီ ဖွဈသညျ။
၎င်းငျး G-spot ဟူသော စကားလုံးကို ၁၉၅၀ ခုနှဈ ကတညျးက ဂြာမနျလူမြိုး ခန်ဓာဗဒေ ပညာရှငျမြားက ထုတျနုတျ သုံးစှဲ ခဲ့ကွပွီး ယနခေ့တျေအထိ ပွောစမှတျတှငျ နကွေခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။ G-spot သညျ အမြိုးသမီးမြား၏ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ အစိတျအပိုငျးတဈခုမှ မယုံကွညျ နိုငျလောကျဖှယျ သကျတောငျ့ သကျသာ ရှိမှုနှငျ့ ကာမဆန်ဒ ပွညျ့ဝ ကနြေပျစမှေု (အထှဋျအထိပျ အရသာ) တို့ကို ဖွဈပျေါစသေော ကြျောကွားသညျ့ ခန်ဓာကိုယျ အစိတျအပိုငျး တဈခုလညျး ဖွဈသညျ။
၎င်းငျး နရောလေးသညျ အမြိုးသမီး ယောနိ အင်ျဂါကဲ့သို့ပငျ အလှနျတုနျ့ပွနျခံစား လှယျသော တဈရှူးမြားဖွငျ့ တညျဆောကျထားပွီး မိနျးမကိုယျ (ယောနိအင်ျဂါ) ၏ အတှငျး အရှပေို့ငျးတှငျ တညျရှိသညျ။ အမြိုးသားမြား၏ လိငျတံ အင်ျဂါကဲ့သို့ပငျ နှိုးဆှပေးသညျ့ အခါ မာကွော တောငျ့တငျး လာပွီး တုနျ့ပွနျတတျသညျ့ ထပျတူညီ သဘာဝလညျး ရှိသညျ။ ထို အစိတျအပိုငျးလေးကို တို့ထိရာတှငျ
နူးညံ့ငွငျသာစှာ ထိတှရေ့နျ အထူး လိုအပျသညျ။ ဖွဈနိုငျလငျြ လကျခြောငျးလေးဖွငျ့ အပွားလိုကျ သာသာ ယာယာ
နိုပျနယျပေးခွငျးဖွငျ့ အမြိုးသမီး၏ ခံစားမှုကို နှိုးဆှ ရယူနိုငျသညျ။
အမြိုးသမီး အတျောမြားမြားတှငျ ယောနိအင်ျဂါ ထိပျရှိ လှနျးပုံသဏ်ဍနျရှိ (အစေ့)လေး ကို နှိုးဆှပေးခွငျး အားဖွငျ့ ကာမ ဆန်ဒ အမွငျ့ဆုံး ခံစားတတျကွသညျကို တှရေ့လရှေိ့သညျ။ ထိုသို့ နှိုးဆှပေးခွငျးသညျ ဆကျဆံမှု၏ အစပိုငျးတှငျသာ ဖွဈပွီး အထှဋျအထိပျ ကာလ မရောကျမီအတှငျး ပြိုးယူပေးသော အဆငျ့တှငျသာ ရှိသေးသညျ။ ကာမ ဆန်ဒနိုးကွှခွငျးနှငျ့ အထှဋျအထိပျ ခံစားခွငျးတို့မှာ ကှဲပွားခွားနားခွငျးကို ကောငျးစှာ နားလညျ သဘောပေါကျရနျ ဆကျဆံမညျ့ စုံတှဲတိုငျး သတိပွုသငျ့သညျ။ အခြို့မှာ စိတျဆန်ဒ နှိုးကွားရုံ သကျသကျသာရှိပွီး ကာမ ဆကျဆံ၍ ပွီးဆုံးခြိနျတှငျ အပွညျ့အဝ မကနြေပျကွခွငျးမှာ နားလညျမှု
လှဲမှားခွငျးကွောငျ့သာ ဖွဈသညျ။ ထိုလှဲမှားမှုသညျ G-spot ၏ အပိုငျး ကဏ်ဍ နှငျ့ ဆကျစပျမှု အမြားကွီးရှိနပွေီး G-spot သညျ အာရုံနိုးကွားမှု အင်ျဂါ၏ အရငျးအမွဈ သို့မဟုတျ အာရုံကွောမြား၏ အလှနျအတှငျး ကသြော လြို့ဝှကျ အစိတျအပိုငျးလေး ဖွဈသညျ။
G-spot ၏ နိုးဆှမှုသညျ အပျေါယံမှ တုနျ့ပွနျလာခွငျးမြိုး မဟုတျဘဲ အမြိုးသမီး အင်ျဂါ ယောနိ၏ အတှငျးပိုငျး အကဆြုံးသော အပိုငျးမှ တုနျ့ပွနျလာသညျ့ ခံစားမှု ရသကောငျး ဖွဈသညျ။ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ပညာပေးခွငျး အားနညျးမှုကွောငျ့ အမြိုးသမီး အတျောမြားမြားသညျ G-spot ၏ အရသာထူးကို ခံစားဖူးသော တှကွေုံ့ဖူးသော တုနျ့ပွနျမှု အလှနျနညျးပါး ကွသညျ။
တဈကိုယျရေ ဖြျောဖွခွေငျးဖွငျ့ ကနြေပျတတျကွသော အမြိုးသမီးမြား အနဖွေငျ့ လိငျအင်ျဂါအတု (Vibratory) ၏ တုနျခါမှုမှ တဈဆငျ့ ရရှိသော ခံစားခကျြကို နှဈသကျ ကွသလို စိတျပကျြ ကွသူမြားလညျး ရှိသညျ။ အခြို့မှာ ယားကြိကြိ ခံစားမှု မှတဆငျ့ G- spot ၏ အရသာကို နှဈသကျ သှားတတျကွသူမြားလညျး ရှိသညျ။
အမှနျမှာ G-spot ၏ တုနျ့ပွနျမှုမှာ ခနျ့မှနျးရ အလှနျခကျပွီး မညျသို့ အကြိုး ခံစားရသညျကို သိရှိရနျအတှကျ အမြိုးသမီးမြား အနဖွေငျ့ မိမိတို့ ကိုယျတိုငျ G-spot ၏ တုနျ့ပွနျမှုကို အရငျ စမျးသပျကွညျ့ ပွီးမှသာ မိမိ၏ လိငျဆကျဆံဖျေါအား မိမိ၏
နှဈသကျသော အနအေထားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွခွငျးဖွငျ့ အကောငျးဆုံးသော ကနြေပျမှုကို ရရှိမညျ ဖွဈသညျ။
ထိုကဲ့သို့ ပွောဆိုရနျအတှကျ မညျသို့မြှ အတားအဆီး မထားသငျ့ဘဲ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပုံမှနျသဘောဝ တဈခုကဲ့သို့ တိုငျပငျမှသာ နှဈဦးစလုံးအတှကျ အလှနျကောငျးသော အတှအေ့ကွုံမြားဖွငျ့ ဆောငျရနျရှောငျရနျမြားကို သတိပွုမိမညျ ဖွဈသလို ပွောဆို ဆှေးနှေးလာသညျ့ အမြိုးသမီးမြား အပျေါတှငျလညျး ဆကျဆံဖျေါ အမြိုးသားက နားလညျမှု လှဲမှားစှာဖွငျ့ ကာမ ရမကျကွီးသူအဖွဈ အထငျမလှဲစရေနျ အထူးအရေးကွီးပွီး လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ကနျြးမာရေး ဗဟုသုတ ပွညျ့ဝသူအဖွဈ အထငျကွီးလေးစား လကျခံပေး သငျ့သညျ။
ခန်ဓာဗဒေ အားဖွငျ့ G-spot ကို မညျကဲ့သို့ ရှာဖှရေမညျကို ဦးစှာ လလေ့ာရပမေညျ။ ဆီးလမျးကွောငျး တဈလြောကျ ယောနိအင်ျဂါ၏ အပျေါပိုငျး ဆီးအိတျနှငျ့ အပွိုငျအနအေထားတှငျ ရှိနပွေီး လှနျးပုံသဏ်ဍနျ အစတေ့ညျရှိရာ၏ အောကျဖကျ အပေါကျဝ တညျ့တညျ့နားတှငျ တညျရှိသညျ။ ရမွေုပျကဲ့သို့ တဈရှူးစမြားက ဆီးလမျးကွောငျးကို ဝနျးရံထားပွီး သှေးလညျပတျမှု ကောငျးမှနျ လာသောအခါ အမြိုးသမီးတို့၏ ကိုယျမှ ထှကျလာသော အရညျကွညျမြားကို အသုံးပွုပွီး ကာမ ဆကျဆံလိုသော ကာမ စိတျဆန်ဒတို့ စတငျ လာပွီ ဖွဈသညျ။ ရမွေုပျကဲ့သို့ ပှစိစိ တဈရှူးမြားသညျ အစေ့၏ အမွဈကဲ့သို့ ရပျတညျနကွေပွီး ယောနိအင်ျဂါ၏ အတှငျးအကဆြုံး နရောတှငျ တညျရှိသညျ။
အမြိုးသမီး ယောနိ အင်ျဂါ အတှငျးသို့ လကျခြောငျး တဈခြောငျး သို့မဟုတျ နှဈခြောငျး ထညျ့သှငျးပွီး အတှငျးဖကျ အရှပေို့ငျး နံရံနှငျ့ ဆီးခုံရိုး၏ အောကျခွနေားတှငျ G-spot တညျရှိပွီး ထိုနရောကို ထိတှမေိ့ပါက G-spot ၏ သုံးပုံတဈပုံသို့ စမျးသပျမိနပွေီ ဖွဈသညျ။
ထိုနရော အရောကျတှငျ ခံစားမှု တုနျ့ပွနျခကျြမြားအဖွဈ အာရုံကွောမြား ပှငျ့ကားလာသညျ့ သဖှယျ ခံစားရပွီး အိစကျ ညကျညောသညျ့ တဈရှူးမြားကို လကျခြောငျးမြားဖွငျ့ မိမိနှဈသကျသော အနအေထားအတိုငျး တဈဖကျမှ တဈဖကျသို့ ညငျသာစှာ အပွောငျးအရှေ့ ပွုလုပျခွငျးဖွငျ့ ပိုမို သကျတောငျ့သကျသာ ရှိသော ခံစားမှုမြိုးကို ရရှိလာမညျ ဖွဈသညျ။ လကျခြောငျးမြားသညျ အမြိုးသား အင်ျဂါနှငျ့ စာလငျြ ပိုမိုထိရောကျလရှေိ့ပွီး အမြိုးသမီး၏ G-spot ရှိရာသို့ တနျးတနျး မတျမတျ ရှာဖှနေိုငျခွငျးလညျး ရှိကွသညျ။
လိငျအင်ျဂါအတု (Sex Toys) ထုတျလုပျသော ကုမ်မဏီမြားက အစနှေ့ငျ့ G-spot ကို နှိုးဆှရာတှငျ ထိရောကျမှု ပွုသော ပုံစံမြားကို ပွုလုပျ၍ ထုတျလုပျ ရောငျးခြ ကွသညျမြားလညျး ရှိသညျ။ ဆေးပညာမှ ကာမ အာရုံ ခံစားမှုကို ပိုမိုနိုးကွားပေးရနျ ပွုစု ကုသရနျ နညျးသဈ တဈခုတှငျ G-spot တဈခုအတှငျးသို့ ဆေးရညျတဈမြိုး ထညျ့သှငျးခွငျးဖွငျ့ ကာမ ဆန်ဒ တုနျ့ပွနျမှု ပိုမိုကောငျးမှနျ စသေညျကိုလညျး ထပျမံတှရှေိ့ထားသညျ။
ထိုသို့ ပွုလုပျခွငျးသညျ လြို့ဝှကျစှာဖွငျ့ ဆောငျရှကျလေ့ ရှိကွပွီး ကုနျကစြရိတျမှာ ပေါငျတဈထောငျခနျ့အထိ ကသြငျ့ပွီး ပုံမှနျ လေးလမှ ခွောကျလ အတှငျး တဈကွိမျ ကုသမှု ခံယူရလေ့ ရှိသညျ။ ခှဲစိတျ ကုသမှုမြားသညျ အလှနျ ကုနျကစြရိတျမြားပွားလှပွီး ခန်ဓာကိုယျအပျေါ ပိုမိုခံစားလိုသူမြား အတှကျမူ အကောငျးဆုံး အခှငျ့ အလမျးမြားပငျ ဖွဈနမေညျ ဖွဈသညျ။
အမြိုးသမီး အတျောမြားမှာ G-spot နှငျ့ ပတျသကျပွီး တုနျ့ပွနျမှု အလှနျကောငျးမှနျကွပွီး ယခုကဲ့သို့ ကုသမှု ခံယူထားခွငျးနှငျ့ မြားစှာ ခွားနားလှခွငျး မရှိကွပေ။ သာမာနျလူမြားအတှကျ မိမိ၏ ခန်ဓာကိုယျအတှငျးသို့ ကုနျကစြရိတျ ကွီးကွီးဖွငျ့ အပျတဈခြောငျးကို ပုံမှနျထညျ့သှငျးပွီး ကာမ ဆန်ဒအတှကျ ဖွညျ့စှကျရမညျ ဆိုသညျမှာ အနညျးငယျသော အကွောငျးပွခကျြမြှလောကျ ဖွငျ့တော့ မဖွဈသငျ့ပေ။
အမြိုးသမီးမြား အနဖွေငျ့ အစေ့၏ နှိုးဆျောမှုဖွငျ့ စတငျသော လိငျဆကျဆံမှုက အမွငျ့ဆုံး အနအေထားသို့ ရောကျရနျ လုံလောကျမှု ရှိနပွေီး ဖွဈသညျ။ ခွုံ၍ ပွောရမညျ ဆိုပါက အမြိုးသမီးမြား၏ လိငျအင်ျဂါသညျ အမြိုးသားမြားအတှကျ စိတျကနြေပျမှု ပေးရနျ လုံလောကျပွီး အမြိုးသား အင်ျဂါသညျလညျး ထိုနညျးတူစှာ အမြိုးသမီးမြား အတှကျ ပွညျ့စုံပွီးသား သဘာဝက ပေးထားသညျ့ ဆုလာဘျ တဈခု ဖွဈသညျ။ လိငျဆကျဆံမှု၏ ကနြေပျမှု မကနြေပျမှုသညျ အမြိုးသမီး၏ ကိုယျရေး ကိုယျတာ ဆန်ဒနှငျ့လညျး အမြားကွီး သကျဆိုငျနသေညျ။ သူမ အနဖွေငျ့ ကာမ ဆန်ဒကို ရယူခံစားလိုလငျြ အကောငျးဆုံးဖွဈမညျ ဖွဈပွီး သူမ အနဖွေငျ့ ဆန်ဒမရှိပါက အမြိုးသားမှ သူမ၏ ဆန်ဒအပျေါ ဖိအားပေးခွငျးမြိုး မပွုသငျ့ဘဲ လိငျဆကျဆံမှု အပျေါ သူမ စိတျဝငျစားနိုငျသညျ့ အခွားပုံစံအသဈမြားကို တီးခေါကျ ကွညျ့တတျရမညျ ဖွဈသညျ။
လူအတျောမြားမြား အငွငျးပှါး နရေသညျ့ ကိစ်စတဈခုမှာ အမြိုးသမီး ခန်ဓာကိုယျမှ ထှကျသော အရညျသညျ G-spot သို့ အမြိုးသားခန်ဓာကိုယျမှ ထှကျသော အရညျနှငျ့ တိုကျဆိုငျမှသာ အမြိုးသမီး ကနြေပျမှု အပွညျအဝ ရသညျဟု ထငျမွငျနကွေ ခွငျး ဖွဈသညျ။ အရညျထှကျခွငျး ဆိုသညျမှာ ရမွေုပျသဏ်ဍနျ တဈရှူးမြားမှ နိုးကွားလာခွငျး သကျသကျသာ ဖွဈပွီး ခြောဆီ တဈခုသဖှယျ အသုံးပွုရနျ သကျသကျသာ ဖွဈသညျ။ အခြို့အမြိုးသမီးမြားမှာ ထိုသို့ အရညျ မြားမြား ထှကျလာခွငျးကို ဆီးသှားသညျဟု ထငျပွီး ဆရာဝနျမြားနှငျ့ ပွသသညျအထိ စိုးရိမျတတျကွပွီး ကြှမျးကငျြသူမြား၏ ဖွရှေငျးခကျြအရ အရေးကွီးသော ကိစ်စတဈခု မဟုတျကွောငျး သိရသညျ။
အရညျထှကျခွငျး၏ အဓိက အခွခေံ အကွောငျးမှာ သူမအနဖွေငျ့ ကာမ ဆကျဆံဖကျအပျေါ ကနြေပျခွငျးကွောငျ့ အခကျြပွသော သင်ျကတေ တဈခုလညျး ဖွဈသညျ။ သူမ အနဖွေငျ့ လိငျဆကျဆံရနျအတှကျ စိတျပကျြခွငျး မရှိသလို ကွောကျရှံ့ထိပျလနျ့ခွငျး မရှိဘဲ ပှငျ့လငျးမှု အပွညျ့ ရှိနခွေငျးကွောငျ့ ထိုသို့ တုနျ့ပွနျလာခွငျးလညျး ဖွဈသညျ။ ထိုသို့ အရညျမြား ထှကျခွငျးကို လိငျဆကျဆံခွငျး၏ အခြိနျကာလ အတှငျး အနှောငျ့အယှုကျ မဖွဈစရေနျ အိပျယာပျေါတှငျ မကျြနှာသုတျ ပဝါသို့မဟုတျ ရစေိုခံ အထညျတဈခု ခငျးထားခွငျးဖွငျ့ ဖွရှေငျးနိုငျသညျ။
ယခု ဆောငျးပါး၏ အဓိက ရညျရှယျခကျြမှာ G-spot ကို အသားပေး နှိပျနှယျခွငျး ပွုလုပျရနျထကျ တဈဦးနှငျ့ တဈဦး ကာမ ဆကျဆံခွငျးအပျေါ ပှငျ့လငျးစှာ အကွိုကျခွငျး ဖလှယျနိုငျရနျသာ ရညျညှနျးသညျ။ ကာမ ဆကျဆံစဉျ နှဈဦးကွား သုံးစှဲသော စကားလုံးမြား၏ အသုံးအနှုနျးအပျေါ တဆငျ့ နားလညျမှု လှဲသှားမညျလော ဆိုသညျ့ ဖိအားနှငျ့ ခံစားခကျြမြာ မထားကွဘဲ ကာမဆကျဆံစဉျ စကားလုံးမှအစ စိတျဆန်ဒအထိ နှဈကိုယျ့ တဈစိတျ ဖွဈလာကွစရေနျ ကွိုးစားအားထုတျမညျ ဆိုပါက အကောငျးဆုံးသော ကာမ သုခကို ခံစားနိုငျကွမညျ ဖွဈသညျ။
အောကျပါ Position တှကေတော့ Gspot ကိုထိစပွေီး ကာမသုခအပွညျ့ရစဖေို့ နညျးစနဈတှဖွေဈပါတယျ လလေ့ာလိုကျပါဦး….
Previous: မျက်နှာအနေအထားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဆံပင်ပုံစံများ
Next: May Thun Kha – မေသွန်းခ